Yenza Uziva Uthando lwam nguBob Dylan - Izinto Zobugcisa
Yenza Uziva Uthando lwam nguBob Dylan
Nangona ingoma ihlala ithathwa njengengoma yothando ethe ngqo, abanye baye babona ukuba uDylan usenokuba wayibhala ngokwembono kaYesu Krestu, ezama ukufikelela kubo bonke aboni ukuze bazive uthando lwakhe oluhlangulayo.
Imvumi eyazalelwa eTexas uAugust 'Augie' Meyers, owaziwa kakhulu njengomdlali webhodibhodi kunye noSir Douglas Quintet kunye neTexas Tornados, badlale ilungu kulo mzila. Ukhumbule ukurekhodwa kwale ngoma ku UMojo Imagazini kaJulayi 2010: 'UBob ngumdlali wepiyano omnandi, xa efuna ukudlala. Ubuze ukuba, 'Wenze Uziva Uthando Lwam', ukuba wena noDoug (Sahm, ilungu elisekayo leSir Douglas Quintet) benisestudiyo, beninokwenza njani? ' Kwaye ndathi, 'Asizukuba nabadubhi ababini, abadlali beekatala ezine, kunye nokunye.' Ndithe, 'Uyibhalile ipiyano okanye ikatala?' Kwaye wathi, Ndiyibhale kwipiyano. Ndamxelela, 'Dlala ipiyano.' kwaye ndathi, 'Ndiza kudlala i-organ, masibe nebhesi enye, igubu elinye kunye nekatala enye.' yiyo ke le ndlela senze ngayo. '
Le ngoma irekhodwe linani labanye abaculi. Babandakanya uBilly Joel wakhe Amanani amakhulu kakhulu uMqulu III ingqokelela kunye neGarth Brooks ye Ithemba leFlats Ingoma yomculo ephantsi kwesihloko esithi 'Ukwenza ukuba uve uthando lwam.' Kwakhona uAdele wagubungela umzila kwi-albhamu yakhe yokuqala ka-2008, 19 .
Ukusukela ngo-2019, ubuncinci ama-459 ebhendi ayilungisile le ngoma. Inani elipheleleyo lezikhuselo likhuthaziwe Amatye agiqekayo ukucebisa ukuba Ingoma ngenye imini inokufaneleka njengomgangatho oyinyani waseMelika.
Intsingiselo yengelosi inombolo 333
Ndizokulinda phaya njengelitye
kodwa ke ndafumana ingoma ephezulu
bamba izinto zakho ndizokusa ekhaya lyrics
usathana wehla waya kumazwi e-georgia